China အဆီထုတ်ကော် Laminating Machine KP-YJ128C ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံ | Kangpa
KP-YJ128C စွမ်းဆောင်ရည် parameter သည်:
power supply: 380V 50HZ3အဆင့်
ထိရောက်သောအကျယ် - 1800mm
အပူ roller သတ်မှတ်ချက်များ: Ø1500 * 1800mm
Coating method: ကော်လွှဲတဲ့အပေါ်ယံလွှာ
စက်မှုဒီဇိုင်းမြန်နှုန်း: 0-50m / min
အရွယ်အစား (L * W * H): ၁၁၆၀၀ * ၂၀၀၀ * ၂၂၀၀ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်
အလေးချိန် - ၆၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် (အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်သည်)
KP -105X ကော်အမှတ်လွှဲပြောင်းဒြပ်ပေါင်းစက်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အဝတ်အထည်အထည်များ၊ ဝင်ရိုးစွန်းသိုး၊ Non-သိုးမွေး၊ ဆန့်အထည်၊ ရက်မ ၀ တ်သောအထည်၊ သားရေ၊ ရေမြှုပ်၊ ယက်ထည်နှင့်အခြားပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အဝတ်အထည်၊ ကားအတွင်းပိုင်း၊ ဖိနပ်နှင့် ဦး ထုပ်၊ ခရီးဆောင်အိတ်များ၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
4. ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ, အချို့သော devices တွေကိုထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်;
၅။ ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော် ၀ င်နိုင်သောအရည်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကော်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်စက်တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်သည်။
၇။ စည်အပူကိုလျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်အပူဆီတို့ဖြင့်အပူပေးနိုင်သည်။
8. စက်၏ roller မျက်နှာပြင်၏အကျယ်အမှန်တကယ်ပစ္စည်း၏ကြီးမားသောအကျယ်အရသိရသည်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
၉။ စနစ်တစ်ခုလုံးကိုအသိဉာဏ်ရှိသော PLC ပရိုဂရမ်၏ထိတွေ့မှုမျက်နှာပြင် (သို့) စက်မှုပုံစံဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ကော် roller
ကော် Laminating စက်
ကော် Lamination စက်
ကော် roller စက်
ရေအခြေပြုကော် Laminating စက်
Ce လက်မှတ်ပါသောရေပူကော် Laminating စက်, Pur Hot Melt ကော် Nonwoven Laminating စက်, အလိုအလျောက်အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating Machine, ပူအရည်ပျော်ကော်လျှောက်ထား, Pur Hot အရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, အဝတ်အဘို့အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating စက်,